बालुवाटार बैठकका दृश्यः सोफा फालेर कुसी, नेतालाई बाँडियो कोरोना जन्तर
२०७७ असार १३ शनिवार
काठमाडौं । बुधबारदेखि सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा शुक्रबार सीमा अतिक्रमणको एजेण्डामा छलफल भएको छ। सीमा अतिक्रमणका विषयमा बैठकमा १८ नेताले विचार राखे ।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले बैठकमा नेपाल र भारतको सीमा विवाद र भएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए। ज्ञवालीले बैठकमा कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि भारतले चासो नदिएको जानकारी गराएका छन्।
‘कूटनीतिक संवादबाट नै नेपालको अतिक्रमित भूमी प्राप्त गर्नेगरी पहल भइरहेको छ’, मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘भारतले सकारात्मक पहल गरेको छैन। तर भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट नै यो बाटो खुला गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।’
सँगै मन्त्री ज्ञवालीले चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले यो कुरा झुटो, भ्रमात्मक र नियोजित प्रचार भएको जानकारी बैठकमा गराए। उनले बैठकमा चीनसँग सीमा समस्या नभएको प्रष्ट पारेका हुन्।
शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने नेताहरुले भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मात्र चर्चा भएको भन्दै तराई र अन्य पहाडी जिल्लामा देखिएको सीमा विवादकोसमेत समाधान गर्ने समय यही भएको धारणा नेताहरुले राखेका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादव, देव गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, रघुवीर महासेठ, छविलाल विक, बेदुराम भुसाल, भीम रावल, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, केशव बडाललगायत धारणा राखेका छन्। सीमा विवादको विषयमा शनिबार बिहान ११ बजेपछि बस्ने बैठकमा थप स्थायी कमिटी सदस्यले धारणा राख्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
अहिले यसरी बहस भएका महत्वपूर्ण विषयले भन्दा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा अध्यक्षको कुर्सी फेरिएको र ‘कोरोना जन्तर’ले चर्चा पाएका छन्।
कसरी फेरियो अध्यक्षको कुर्सी ?
बुधबारको बैठकमा दुई अध्यक्षका लागि सोफा। वरिष्ठ नेतासहित अन्य सचिवालय सदस्यका लागि कुर्सी र स्थायी समिति सदस्यका लागि बेन्च राखेको भन्दै प्रश्न उठेपछि शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्षको आसन फेरियो।
सरकार र पार्टी नेतृत्वमाथि चर्को आलोचना गर्दै आएका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले अध्यक्षलाई कुर्सी र जीवनशैली फेर्न सुझाव दिएका थिए। उनले अध्यक्षलाई राजा महाराजाको जस्तो सम्मान र नेतालाई दोस्रो दर्ताको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। रावलको धारणामा केही स्थायी कमिटी सदस्यले साथ दिएपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अनुपस्थितिमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सोफा हटाउन र कुर्सी ल्याउन आग्रह गरे।
सोफा हटाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता र सचिवालय सदस्य बस्ने कुर्सीमै बसेर बैठकको अध्यक्षता गरे। कुर्सी अगाडि पछाडि भएको र मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै नेताले प्रश्न गरेपछि वरिष्ठ नेतालाई अध्यक्षसँगै दुईतर्फ राखिएको थियो। कम्युनिस्टले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने र उसले राजा महाराजाको जस्तो ढर्रा र ढाँचा नपार्ने भन्दै चर्चा हुन्छ। तर, बालुवाटारमा त्यस्तै दृश्य देखिएपछि कुर्सीको विषयले चर्चा पाएको हो।
बैठकमा विभिन्न गम्भीर विषयमा छलफल हुँदै गर्दा केही नेता कुर्सी, झन्डा र सोफामा अल्झिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
कोरोना ‘जन्तर’ !
शुक्रबार बालुवाटारमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले एउटा ‘कोरोना जन्तर’को चर्चा गरे। पत्रकारले उनलाई कार्डको विषयमा सोध्न थालेपछि उनले पहिला धामीले भूत–प्रेत लाग्दैन भनेर जन्तर लगाइदिएजस्तै कोरोना जन्तर लगाइदिएको बताएपछि पत्रकारले उनलाई केहीबेर जन्तरबारे प्रश्न गरे।
उनले घाममा देखाउनु नहुने भन्दै ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ देखाए। बालुवाटारको बैठकमा यो कार्ड वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बाँडेकोसमेत उनले सुनाए। ‘यसले कोरोना उडाउँछ कि उडाउँदैन थाहा छैन’, उनले कोटले कार्ड छोप्न खोज्दै भने, ‘उही बेसारको धुलो जस्तो हो कि !’
यो कार्ड बुधबारकै बैठकमा बाँडिएको देखिन्छ। बैठकमा उपस्थित अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहुँदै सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्य सबैले यो कार्ड लिएको देखिएको छ।
केही संसदले भने यो कार्ड किन्न साढे तीन सय खर्च गरेका छन्। जुन कार्ड संसद भवन अगाडि बिक्री गर्न नै राखिएको पाइएको छ। धेरैले यो कार्डको भ्रमममा कम्युनिस्ट नेता परेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। अन्नपुर्ण पोष्टबाट
सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी भैरहेको पौडेलको खुलासा
प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा भक्तपुरमा प्रदर्शन
ओली(दाहालबीचको भेटवार्ता सम्पन्न
२०७७ असार २० शनिवार
गाेरखामा काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु
डब्ल्यूएचओका आग्रह, कोरोना लगातार बढिरहेको छ, सतर्कता अपनाउनुस्
ओलीइतर समुहका मन्त्रीहरुको गोजीमा राजीनामा पत्र
२०७७ असार १७ बुधवार
गरगहना परीक्षण तालीम
गरिमा बैंकले मिनाहा गर्यो असारको व्याज
२०७७ असार १८ बिहीवार
प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्दा देशको कुटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको छः पूर्व राजदूत उपाध्याय
२०७७ असार १६ मंगलवार
संकटकाल घोषणा कि ओलीको राजीनामा ?
होटेल ‘ताज’ बमले उडाउने धम्की ‘